किन भाईरल भैरहेको छ यी पुलिसवालीको तस्वीर ? यस्तो छ कारण - pnpkhabar.com
You are at:Home»हलिवुड/बलिवुड»किन भाईरल भैरहेको छ यी पुलिसवालीको तस्वीर ? यस्तो छ कारण
किन भाईरल भैरहेको छ यी पुलिसवालीको तस्वीर ? यस्तो छ कारण
By रिता घिसिंग on ३० पुष २०७४, आईतवार ०५:०८ हलिवुड/बलिवुड
एजेन्सी : जब सोशल मिडियामा कुनै पनि समाचार आउछ तब त्यो समाचार भाईरल हुन्छ। मान्छेहरु सत्य के हो भन्ने थाहा नभईकन एउटा कुरा पाएपछि त्यहि कुरामा सहिमा सहि थपेर बस्छन्। तर बास्तविकता बाहिरिएपछि उक्त भाईरल समाचार झुटो साबित हुन्छ। अहिले यस्तै एउटा समाचार आएको छ जुन समाचार पन्जावको एक SHO को हो जो धेरै सुन्दर छिन्। उनी पन्जावको बठिन्डा स्टेशनको SHO हुन् र उनको नाम हर्लिन मान हो। केहि दिनदेखि उनको फोटो भाईरल भईरहेको छ। मानिसहरूले पनि उनलाई पुलिस अफिसरका रूपमा बुझिरहेका छन्। तर यस फोटोको पछाडी लुकेको बास्तविकता अर्कै छ।
उनी पुलिस SHO होइन अभिनेत्री हुन् सोशल मेडिया प्ल्याटफर्म फेसबुक, इन्स्टाग्राम, ट्विटर र वाट्सएप्समा जुन महिला पन्जावको पुलिस भनिरहेको छ बास्तवमा उनी एक बलीउड अभिनेत्री हुन्। जसको नाम कैनाट अरोरा हो। अहिले उनी एउटा पन्जाबी चलचित्रको सुटिंग गर्दै छिन्। जुन चलचित्रको नाम ‘जग्गा जेउंदा’ हो। उनी आफैले इन्टाग्राममा पुष्टि गरेकी छिन् । कैनाट अरोराले लेखिन्- ” हार्लिन मान मेरो चलचित्रको क्यारेक्टर रोल हो जुन चलचित्रको नाम जग्गा जेउंदा हो। मेरो मोबाइलमा गिरफ्तार हुनको लागि तयार हो जस्ता धेरै म्यासेज र जोक्सहरु आइरहेका छन्रो। मा कुनै बास्तविक पुलिस अफिसर होइन। ३ दिनदेखि यो समाचार भाइरल भैरहेको छ।” उनी आफैले चलचित्रको यो फोटोहरु सोशल मेडियामा सार्बजानिक गरेकी थिइन् त्यसपछि मानिसहरुले उनलाई बास्तविक अफिसर सोचेका हुन्।
धेरै बलिउड चलचित्रहरू खेलिसकेकी छिन्
कैनाटले बलिउडमा केहि ठूला चलचित्रहरूमा अभिनय गरीसकेकी छिन्। जसमा ग्रान्ड मस्ती, खुट्टा-मिठा र धेरै चलचित्रहरूमा भूमिका निभाई सकेकी छिन्। यती मात्र होइन, उनले पन्जाबी चलचित्र फाररमा पनि काम गरेकी छिन्। अब उनी जग्गा जेउंदामा पुलिस अफिसरको भूमिका निभाउदै छिन्।